‘आत्मबल नै कोरोनाको अचूक औषधि रहेछ’ « Mero LifeStyle
‘आत्मबल नै कोरोनाको अचूक औषधि रहेछ’
सुमित्रा लुईंटेल	|| 23 May, 2021
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढेको छ । सामान्य नागरिकदेखि चर्चित व्यक्तिसम्मलाई कोरोनाले छोडेको छैन । त्यसो त नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित बने । तिनैमध्येका एक हुन्– गायक प्रकाश सपुत । सपुतले कोरोना जितिसकेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर सपुतसँग मेरो लाइफस्टाइलले गरेको कुराकानी :
तपाईंलाई कोरोना कहिले पुष्टि भयो ?
मेरो नयाँ गित ‘मेरो पनि हैन र’ को सम्पादनको काम चलिरहेको बेला एकदमै शरीर दुख्ने, छटपटी हुने, चिटचिट हुने समस्या देखियो । एक दुई दिनसम्म पनि कम नभएपछि मलाई कोरोनाका शंका लाग्यो । कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।
लक्षणहरु के–के देखिए ?
पोजिटिभ देखिएपछिको चार दिन मलाई निकै सकस भयो । ज्वरो आएन, खोकी लागेन तर, शरीर निकै दुख्यो । छटपटी हुने, राती निन्द्रा नलाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखिएको थियो । आत्मबल एकदम कमजोर भएको थियो । आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि मनमा एक प्रकारको डर पैदा भएको थियो ।
आइसोलेसनमा बस्दा के गरेर समय बिताउनु भयो ?
अरु बेलापनि त्यती धेरै घुम्ने, साथीभाईहरुसँग रमाउने स्वभाव मेरो छैन । काम बाहेक अरु समय म प्रायः एक्लै समय बिताइरहेको हुन्थे । पुस्तक पढेर, चलचित्रहरु हेरेर अन्य खोज मूलक कुराहरु हेरेर समय बिताउँथे । आइसोलेसनमा बस्दा पनि मैले यसरी नै समय बिताए । किताब पढिनँ तर फिल्म, सिरिजहरु चाहिँ हेरें ।
कुनै डाक्टरको सल्लाह लिनु भयो कि भएन ?
मैले कुनैपनि डाक्टरको सल्लाह लिइनँ । होम आइसोलेसनमै बसें, योगा व्यायामहरु गरेर आत्मबल एकदमै बलियो बनाएर बसें । आफ्नो ख्याल आफैं राखें प्रसस्त मात्रामा पानी पिएँ, मन नलागे पनि खाना खाएर आपूmलाई कमजोर हुन दिइनँ ।
कुन–कुन औषधिको सेवन गर्नुभयो ?
होम आइसोलसनमा बस्दा मैले औषधीहरुको सेवन पनि गरिन । दुरी कायम गर्थे, बिहान उठेर व्यायाम गर्थे । स्वाद नआए पनि प्रसस्त मात्रामा खाना र झोलिलो पदार्थहरुको सेवन गर्थें । आत्मबल बलियो र मलाई माया गर्ने शुभचिन्तकहरुको शुभेच्छाले नै औषधिको काम ग¥यो ।
मानसिक तनाव कत्तिको हुँदो रहेछ ?
मनमा अनेक किसिमको सोच आइरहने । आँत कमजोर हुने । एन्जाइटीजस्तो डर लाग्ने, म त मर्छुजस्तो लाग्ने जस्ता सोचहरु आउँथे । यो कोरोनालाई म सहजै जित्छु भने पनि मानसिक रुपमा यसले कमजोर भने बनाउने रहेछ । अत्मबल बलियो बनाउँदा बनाउँदै पनि एकप्रकारको मानसिक तनाव भएको थियो ।
डर कतिको लागेको थियो ?
मेरो परिवारमा चार जनालाई कोरोना संक्रमण भएको थियो बाबा, ममी भाई र म । अरुलाई त त्यस्तो गाह्रो भएन तर, ममीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो । यहाँलाई अक्सिजन नै दिएर राख्नु परेको थियो । आफुलाई भन्दा पनि आमालाई गाह्रो हुँदा निकै पीडा र डर पैदा लागेको थियो ।
परिवारसँग छुटिएर बस्नु पर्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ ?
सबै भन्दा पीडा परीवारसँग छुटिएर बस्नु पर्दा भएको थियो । ५ वर्षकी सानी छोरीले मलाई भेट्न खोज्दा नआउ भन्थें । परिवारले पनि बाबालाई भेट्न हुँदैन भन्दा नराम्रो लाग्थ्यो । छोरीले बाबालाई किन भेट्न हुन्न ? के भएको छ बाबालाई भन्ने प्रश्नले मन भकानिन्थ्यो ।
तपाई संक्रमित भएकै बेला ‘मेरो पनि हैन र’ गीत ट्रेन्डिङमा थियो कस्तो अनुभूति भयो ?
भर्खर गीत रिलिज भएको थियो । सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका थिए । बिरामी अवस्थामा त्यस्ता प्रतिक्रियाले अलिकति भएपनि औषधिको काम गर्ने रहेछ । मानसिक रुपमा म अलि–अलि त्यतातिर पनि बाँधिए । त्यसले गर्दा पनि म चाँडै कोरोनामुक्त भएँ कि भन्ने पनि लाग्छ ।
कोरोनालाई जित्न के–के गर्नुभयो ?
मेरो अनुभूतिमा कोरोनाले निकै गलाउँछ तर मानसिक रुपमा आफूलाई बलियो राख्न सकियो भने जितेरै छाडिन्छ । ४ रात सुत्नै सकिनँ, निकै गाह्रो भयो । खासगरी मन भूलाउन सक्नुपर्ने रहेछ । म कोरोना संक्रमित हुँ, बिरामी छु भन्ने सोचबाट आफूलाई पर लाने प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ । पाँचौं दिनबाट अलि सन्चो भएको महसुस गरेँ । लाग्यो, अब मैले कोरोना जितेँ । ६ दिनपछि टेस्ट गराउँदा परिणाम पनि नेगेटिभ नै आयो । यो बेलामा मैले कोरोनालाई परास्त गर्न पहिलो कुरा त सकारात्मक सोचें, व्यायाम गरें, पर्याप्त पानी पिएँ, प्रशस्त झोलिलो कुरा खाएँ ।